HGH थाईल्याण्ड - बैंककमा विकास हार्मोनको बारेमा बढि जान्नुहोस्
विकास हार्मोन (वृद्धि हार्मोन, GH, HGH, Somatotropin, somatropin) एन्टरियर पिट्युटरीको पेप्टाइड हार्मोन, जुन खेलहरूमा प्रयोग गरिन्छ मांसपेशियों को राहत को गठन को लागि। विकास हार्मोन वा सोटोट्रोपिन (लिथुआनिया सोमा - शरीरबाट) त्यस जवानका लागि यसको नाम पाएको छ, यसले रैखिक (लम्बाईमा) मा एक चिनारी गतिको कारण दिन्छ। विकास मुख्यतया अंगको हड्डीको विकासको कारण थियो।
रक्त मा वृद्धि हार्मोन को बेसलाइन एकाग्रता 1-5 एनजी / मिलीलीटर हो, जबकि चोटहरु 10-20 सम्म र हुन सक्छ 45 एनजी / एमएल पनि हुन सक्छ। यो पहिलो 1956 मा पृथक गरिएको थियो। हाइपोथोमसबाट संकेतहरूको प्रतिक्रियामा पिट्यूट ग्रंथिमा विकास हार्मोन सिकाउँछ। प्रायः, बीस वर्ष पछि, शरीर द्वारा यो हार्मोनको उत्पादन घट्छ। वृद्ध प्रक्रिया प्रत्यक्ष वृद्धि हार्मोन को रिलीज दर संग सम्बन्धित छ। औसतमा, 20 वर्ष पछि, हरेक 10 वर्ष 15% द्वारा उत्पादनको साइज घटाउँछ।
विकास हार्मोनसँग कुनै यौन मतभेद छैन। त्यो हो, यसको स्तर पुरुष र महिलाहरु मा बराबर छ। यस तथ्यको बावजुद विकास विकास हार्मोनमा तयार पारिएको प्रयोग, VADO (विश्व विरोधी डपिंग संगठन) प्रतिबन्धित, HGH तैयारी उपलब्ध छन् थाईल्याण्ड.
HGH को औषधीय गुण:
- Anabolic प्रभाव - मांसपेशियों को विकास को कारण बनता छ
- विरोधी catabolic कार्रवाई - मांसपेशियों को टूटने को रोकथाम
- शरीरको मोटो कम गर्छ
- ऊर्जा प्रयोगमा सुधार गर्दछ
- गति उपचार
- कायाकल्प को प्रभाव छ
- आन्तरिक अङ्गहरूको पुन: वृद्धिलाई उत्तेजित गर्छ (उमेरको साथमा घुमाइएको)
- हड्डी वृद्धिको कारणले र जवान मानिसहरु मा वृद्धि को लागी 26 वर्ष सम्म (विकास को क्षेत्रहरु को बंद गर्न सम्म), हड्डियों लाई मजबूत गर्दछ
रगतमा ग्लूकोजको स्तर बढ्छ
- प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ
केही प्रभावकारी औषधीले आफैंलाई असर गर्छ, तर यसको प्रभावको ठूलो भाग इन्सुलिन-जस्तै वृद्धि कारकद्वारा आएको छ IGF-1 (पहिले यसलाई भनियो Somomomedin C), जो जिगरमा विकास हार्मोनको कार्यद्वारा उत्पन्न हुन्छ र उत्तेजित गर्दछ। धेरै आन्तरिक अंगहरूको वृद्धि। आईजीएफ-1 को क्रिया संग सम्बन्धित खेलहरुमा विकास हार्मोन को लगभग सबै प्रभावहरु।
उमेर-सम्बन्धित परिवर्तन विकास हार्मोनको स्रावमा
विकास हार्मोनको स्वेच्छा निरन्तर उमेर संग कम हुन्छ। यो बुजुर्गमा कम से कम छ, जसले आधारभूत रूपमा कम गरेको छ, र स्रावको चोटको आवृत्ति र आयामको आयाम। प्रारम्भिक बचपनमा आधारभूत हार्मोोन हार्मोोन उच्चतम हुन्छ, किशोरतापनको अवधिमा अधिकतम स्रावको आयामले चाँडो रैखिक वृद्धि र भित्ताको समयमा। विकास हार्मोन को स्राव मा सर्क्रियन लय:
विकास हार्मोन र धेरै अन्य हार्मोनको स्राव जुन आवधिक रूपमा हुन्छ र दिनको दौडान धेरै चोटहरू छन् (सामान्यतया चोटी स्रावले प्रत्येक 3-5 घन्टा हुन्छ)। उच्चतम चोटी रातमा, एक घण्टा पछि निदाईरहेको छ।
थाईल्याण्डमा बडिबिल्डिङमा वृद्धि हार्मोन
सुरुमा, विकास हार्मोनको तयारीमा स्वास्थ्य उद्देश्यको लागि प्रयोग हुन थाल्यो, तथापि, प्रायः यो हार्मोन खेलमा व्यापक थियो, यसको कारण मांसपेशिहरु ठूलो मात्रामा र शरीरको बोसो कम गर्न को लागी। HGH को पहिलो तयारी एक पिट्यूटरी कोरहरू थिए, र केवल 1981 मा पुनःसंरक्त औषधि औषधि somatotropin बनाइयो।
1989 मा, ओलम्पिक समिति द्वारा बोभिन वृद्धि हार्मोन प्रतिबन्धित भएको थियो। यस तथ्यको बावजूद एथलेटिक प्रयोजनों मा वृद्धि हार्मोन को उपयोग निषिद्ध छ, पछिल्लो दशक मा, दबाइ को बिक्री धेरै पल्ट बढयो। मुख्यतया, खेलहरूमा प्रयोग गरिएको हार्मोन हार्मोन, विशेषतया शरीर सौष्ठवमा, जहाँ यो अन्य एनाबोलिक ड्रग्ससँग संयुक्त छ।
दुबई मांसपेशिहरु मा ठूलो मात्रा मा र मोटी जल को बढावा
खेलमा HGH लोकप्रियता को मुख्य कारण घटते वसा को मात्रा को कम गर्न को क्षमता हो। यसबाहेक, अध्ययनले देखाएको छ कि विकास हार्मोन लिदै दुबईको संचयको कारणले दुबला मांसपेशी जन, कनेक्टिव ऊतकहरू र मांसपेशिहरु को मात्रा बढाउँछ।
विकास हार्मोनको अर्को उपयोगी प्रभाव - चोटहरूको आवृत्ति घटाउनुहोस्। यो हड्डी र कनेकिङ (tendons, कार्टिलेज) ऊतक को मजबूत गर्न को लागी यसको कारण हो। वृद्धि हार्मोन चोट र पछि ऊतक उपचार र ऊतक उत्तीर्ण गर्दछ।
यो ध्यान दिइनेछ कि पावरलिफ्टिंग मा HGH को प्रयोग बिन्दु हो, किनकी प्रयोग मा पायाएको थियो कि यो पावर प्रदर्शन को बढावा नहीं गर्दछ। Somatotropin पनि सहनशीलता र कार्यक्षमता बढ्छ, र यसको विपरीत, थकानको सीमामा कमी र रिकभरी बढ्दै जान्छ, यस प्रकारका विकास हार्मोन त्यस्तो खेलका एथलीटहरूको लागि बेकार छन्, जहाँ यी संकेतकहरू।
सामान्य निष्कर्ष यो हो कि विकास हार्मोन खेलहरु मा राहत प्राप्त गर्न को उद्देश्य संग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उच्च दक्षता, दुष्प्रभाव को कम घटना, ड्रग्स को लिंग र क्षमता को कार्य को प्रभावित गर्दैन, को कारण नहीं हो androgenic प्रभाव र पीसीटी को आवश्यकता को आवश्यकता छैन कुल वजन को मासिक दर पछि थोडा (3-4 किलो), र केहि अवस्थाहरूमा सबै परिवर्तनमा वसाको ठूलो हानि संग सम्बन्धित छैन।
ड्रग्सको उच्च लागत प्रति 2-3 हज़ार डलरको बारेमा हो।
मानव विकास हार्मोनको साइड इफेक्ट
किनभने HGH मानव शरीर मा स्वाभाविक रूपमा उत्पादन गरिएको छ, HGH को साइड इफेक्ट दुर्लभ छन्। साइड इफेक्ट मुख्यतया ती अवस्थामा रहेका छन् जहाँ विकास हार्मोन प्रयोग गरिन्छ र विशेषज्ञहरु द्वारा निर्दिष्ट भन्दा लामो समय भन्दा बढी खुट्टाहरूमा प्रयोग गरिन्छ। अभ्यासमा, मानव विकास हार्मोन (घटना को आवृत्ति) को निम्न साइड इफेक्टहरू छन्:
सुरंग सिन्ड्रोम Extremities मा दुख र नम्रता द्वारा प्रकट छ। यो तथ्यको कारण हो कि मांसपेशियों को बढती मात्रा परिधीय तंत्रहरु लाई बढावा दिइन्छ। यस पक्ष प्रभाव खतरनाक छैन र खुट्टा कम गर्न पछि तुरुन्त समाधान हुन्छ।
द्रव को संचय, शायद एक साइड इफेक्ट, किनकी द्रव को संचय मांसपेशियों मा छ, उनलाई ठूलो आकार र लचीला दे। सामान्यतया, पाठ्यक्रमको अन्त्य पछि कम से कम पछाडि घटना।
उच्च रक्तचाप - या तो HGH को खुराक को कम गरेर, या एंटीहाइपीर्टीनिक औषधि को उपयोग गरेर हटाईयो।
थाइरोइड ग्रैंडको प्रकार्यको निषेध - मानसिकताले आफूलाई प्रकट गर्दैन, किनभने दबाब धेरै कम छ। यसको उन्मूलनको लागि र वृद्धि को चक्र को दक्षता प्रति दिन 25 MCC को एक खुराक मा थ्योरोक्सिन को प्रयोग गरिन्छ। विकास हार्मोनको विच्छेद पछि, थाइरोइड प्रकार्य पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित भएको छ।
हाइपिर्लीकेमिया रगतमा ग्लूकोज स्तर बढाउनुहोस्। निषेध इन्सुलिन वा लागू पदार्थहरू जुन अग्लो प्यान्रेरास (ग्लिसलाइज) को उत्तेजित गर्दछ। सामान्यतया थप उपायहरू आवश्यक छैन र पूर्ण रूपमा उल्टाउन सकिँदैन। तपाईं अल्फा लिपोइक एसिडका साथ पनि पूरक लाग्न सक्नुहुनेछ, यसले इन्सुलिन संवेदनशीलतालाई पुनर्स्थापित गर्दछ।
Acromegaly - यो रोग विकास को हार्मोन को ड्रग्स को स्पष्ट दुर्व्यवहार को कारण हुन्छ। सही रूपमा लागू हुँदा, फेला परेन।
हृदय र अन्य अंगहरुको हाइपरट्रोफी केवल ठूलो खुराक मा HGH को लामो उपयोग को मामला मा हुन्छ। सही रूपमा लागू हुँदा, फेला परेन।
विकास हार्मोन को पौराणिक साइड इफेक्ट
पेटमा वृद्धि - यो व्यापक रूपमा मानिन्छ कि हार्मोनले आन्तरिक अङ्गहरू (जस्तै आंतहरू र अङ्ग्रेजीहरू IGF-1 का लागि रिसेप्टरहरू) को कारण पेट हार्मोन पेटमा वृद्धि गर्न सक्छ। हाल यस तथ्याङ्कको कुनै वैज्ञानिक प्रमाण छैन, तथापि, यसको साथमा पेशेवर बडिबिल्डरहरूको वातावरणमा पेट को परिवर्तनहरूको उज्ज्वल उदाहरण। तथापि, अधिकांश एथलीटहरूको व्यावहारिक अनुभवले देखाउँछ कि विकास हार्मोनको क्लासिक कोर्स पेटको विकासको लागि नेतृत्व गर्दैन। विशेषज्ञहरु को विश्वास छ कि पेट को बढावा (अंग्रेजी इंटरनेट मा शब्द "GH गट" शब्द को रूप मा धेरै प्राकृतिक रासायनिक प्रभावहरु हो) र यो सम्भव छ जब इन्सुलिन, स्टेरियोड्स संग संयोजन मा GH को ठूलो खुराकहरु को उपयोग गर्दा ठूलो मात्रा मा खपत संग खानाको।
लिंग को शक्ति र प्रकार्य मा प्रभाव - HGH यौन क्रियाकलाप मा कुनै नकारात्मक प्रभाव छैन।
आफ्नो विकास हार्मोन को स्राव को दमन - प्रोफेसर एल्मर एम। क्रेनटन, एमडी ले 100 रोगियों भन्दा अधिक एक अध्ययन को संचालन गरे, जो आफ्नो स्वयं को स्राव दबाने को खोज नहीं गरेको थियो।
क्यान्सर - विकास हार्मोनले ट्यूमर कोशिकाहरु को विभाजन को एक नाटकीय एक्सेलेरेशन को कारण बनता छ, त्यसैले शोधकर्ताओं को मांसपेशियों को वृद्धि हार्मोन को बारे मा चिंतित हो। त्यहाँ एक हार्दिक अध्ययन थियो, जो मान्छे को विकास हार्मोन संग व्यवहार गरिएको थियो, नेपप्लास्टिक प्रक्रियाहरु को आवृत्ति उनि शेष जनसंख्या देखि अलग नहीं हो जो कि विकास हार्मोन को कार्बोनेनिक प्रभाव को अनुपस्थिति को बारे मा बता सकते हो।
साइड इफेक्टहरूको बारेमा सामान्य निष्कर्ष
विकास हार्मोनले अल्पसंख्यक खुट्टाहरूमा लागू गर्दा कम प्रभावको कारण हुन्छ। लगभग सबै साइड इफेक्टहरू अपरिवर्तनीय हुन्छन्। एकै समयमा, यो स्पष्ट रूपमा साबित भएको थियो कि HGH को तैयारी शारीरिक फिटनेस सुधार गर्न, खराब कोलेस्ट्रोललाई कम गर्न, छाला सुधार, हड्डिहरु र लेगामेंटहरू र धेरै अन्य प्रभावकारी प्रभावहरूलाई सुधार गर्न सक्दछ।
विकास हार्मोनको उत्तेजना
विकास हार्मोन को स्राव को मुख्य नियामक - हाइपोथोमस (पेप्टाइड हार्मोन) को हाइडोमामस (हेटोटेटिनटिन र हेटोटोबिनिन), हाइपोथोमस को न्यूरोसैक्टरी कोशिकाहरु लाई पिट्यूटरी को पोर्टल रेजहरु मा सीधी र सीधे स्नोट्रोप्रो मा काम गर्दछ। तथापि, यी हार्मोनहरूको सन्तुलन र विकास हार्मोनको स्रावमा धेरै शारीरिक कारकहरू प्रभावित हुन्छन्। वैज्ञानिकों ले साबित गरेको छ कि हार्मोन विधिहरु को उपयोग बिना XHUMX-3 पल्ट को विकास को हार्मोन को स्तर मा स्राव को स्तर बढायो।
पेप्टाइडहरू विकास हार्मोनको सबैभन्दा शक्तिशाली उत्तेजनाहरू हुन्, एकाग्रता बढाउनुहोस् 7-15 पटक समकक्ष पाठ्यक्रमको लागत धेरै पटक तल:
HGH फ्रेग (176-191) - टुक्रा
बडी हार्मोन र बडी बहालीमा पेप्टाइड्स
पेप्टाइड्स (ग्रीकबाट। Πεπτος - पौष्टिक) - जसको अणुहरु एक श्रृंखला पेप्टाइड (एमेड) बांडमा लिङ्क गरिएको α-amino एसिड को अवशिष्टहरु देखि बनाइएका एक परिवार। तिनीहरू प्राकृतिक वा सिंथेटिकल यौगिक हुन् जसमा दसौं, सयौं वा मोनरोमेरिक एकाइहरू छन् - अमीनो एसिड। यो वर्ग धेरै विविधता हो र शरीरमा विभिन्न नियन्त्रित कार्यहरू गर्दछ। यस लेख मा हामी केवल उन पेप्टाइड्स को विचार गर्दछ जो खेलहरु मा शारीरिक संकेतक को सुधार को लागि प्रयोग गरिन्छ।
हालको बजारमा थाईल्याण्ड अधिक र अधिक प्राय: त्यहाँ पेप्टाइडहरू छन्, जो वृद्धि हार्मोनको उत्तेजना हुन्छन्। थाइल्याण्डमा बडिबिल्डिङमा सबैभन्दा लोकप्रिय पेप्टाइडहरू:
Ghrelin को समूह (GHRP): (इंजेक्शन पछि तुरुन्त एक स्पष्ट जीआर पीक एकाग्रता बनाउनुहोस्, दिन को समय र रगत मा somatostatin को उपस्थिति)।
GHRP-6 र हेक्सारेलिन
हर्मोनको हार्मोोन (एचआरएचएच) जारी गर्ने समूहले: (शरीरमा परिचयको कारणले एकाग्रतामा लिभ-जस्तै वृद्धिको कारणले गर्दा कमजोर हुनेछ जुन घटेको समयमा प्राकृतिक ग्यास एसोसिएशन थोपा थोपा थोपा र कम प्राकृतिक GR को एकाग्रता मा वृद्धि (उदाहरणार्थ रात को समयमा) .अन्य शब्दहरुमा GHRH प्राकृतिक प्रक्रिया वक्र परेशान बिना, जीआरएस को स्राव बढ्छ।)
HGH फ्रेग (176-191) विकासको हार्मोन (मोटो बर्नर) को अंश
धेरै प्रश्न उठ्छन्, कृत्रिम मानव वृद्धि हार्मोन छ भने, नयाँ पेप्टाइड पदार्थको प्रयोग किन गर्नुहुन्छ? जवाफ सरल छ: पेप्टाइड उत्तेजनाहरू धेरै सम्भावनात्मक फाइदाहरू छन्।
पेप्टाइडहरू वृद्धि हार्मोन भन्दा सस्तो छ। एउटै कोर्सको लागत धेरै पटक कम हुनेछ।
एक्शन र आधा-जीवनको विभिन्न तवरले हामीलाई इष्टतम एनाबोलिक प्रतिक्रियाको लागि एकाग्रता वक्र हेरफेर गर्न अनुमति दिन्छ।
भूख र चयापचयमा विभिन्न प्रभावहरू, तपाईंलाई ती वा अन्य पदार्थहरूमा प्राथमिकता दिन अनुमति दिन्छ।
यस समय पेप्टाइड्स को उत्पादन र वितरण कानून द्वारा विनियमित छैन, त्यसैले यो अनलाइन आदेश सुरक्षित छ।
तुरुन्तै र पूर्णतया भंग भयो, त्यसैले डपिंग नियन्त्रणको लागि कुनै डर छैन।
पेप्टाइडहरू, साथसाथै क्लासिक विकास हार्मोन प्रामाणिकता जाँच गर्न सजिलो छ। औषधि व्यवस्थापन पछि प्लाज्मामा भोटेटोट्रिन स्तरमा परीक्षण पास गर्न पर्याप्त छ।
यी पाठ्यक्रमहरू वृद्धि हार्मोन फिट गर्न?
20 वर्षको उमेरमा पुरुष र महिला दुवै द्वारा विकास हार्मोन प्रयोग गर्न सकिन्छ (अधिक जवान व्यक्तिहरूले हड्डीको महत्वलाई अझ बलियो बनाउनका लागि हड्डीहरूको अतुल्य विकासको अनुभव गर्न सक्छन्)। कुल जनसंख्या थोडा बढ्छ, यो ठूलो परिणामको रूपमा हुन्छ वसाको हानि।
एक कोर्स पछि र पछि साइड इफेक्टहरू लगभग अवलोकन गरिएन, तिनीहरू प्राय: उल्टाउने हुन्छन्।
यस रोगले मधुमेहहरूको लागि आलोचना गर्दछ (वृद्धि हार्मोनले रक्तमा ग्लूकोजको मात्रा बढाउँछ), सावधानी हाइपरटेन्सनमा प्रयोग गर्नुपर्छ (मानव वृद्धि हार्मोनले यसको वृद्धि गर्न सक्छ)। लागूपदार्थ प्रयोग गर्नु अघि तपाईंले डाक्टरसँग परामर्श गर्नुपर्दछ।
थाईल्याण्डमा शीर्ष3लोकप्रिय HGH